မနက်ဖြန် မြန်မာနဲ့တွေ့ဆုံမယ့် မလေးရှား .. | FOX Sports Myanmar
မြန်မာအသင်းသတင်း | နိုဝငျဘာ 24, 2019
မနက်ဖြန် မြန်မာနဲ့တွေ့ဆုံမယ့် မလေးရှား ..
မလေးရှားက မြန်မာနဲ့မနက်ဖြန်တွေ့မယ်။ အဖွင့်ပွဲဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆုဖလား မှန်းနေတဲ့ အသင်း ၊ ၂၀၁၇ တုန်းက မြန်မာကို အုပ်စုအတွင်းမှာ အနိုင်ကစားထား တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ ဆီးဂိမ်းမှာ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံထားမှုဖြစ်တယ်။ အခြားနေရာတွေမပါ ဘူး ၊ ဒီပြိုင်ပွဲ သီးသန့်အဖြစ်ထည့်ပြောဖြစ်တာတွေပေါ့။
ပြီးတော့မလေးရှားနည်းပြဖြစ်သူ ONG KIM SWEE ဆိုတာကလည်း လူငယ်အသင်း၊ လူကြီး အသင်းမှာ သူခြေ၊ သူ့လက်တွေချည်းပါပဲ၊ မလေးရှား အသင်းသားတွေ အားလုံးဟာ သူ့လက် ထွက်ဖြစ်တယ်။ ဦးကြည်လွင်လိုမျိုး သူဟာ လည်း မလေးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ခေါင်း ကိုင် ဂုရုတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ အသက်က ၄၈ နှစ်ပဲရှိသေးပေမယ့် သူ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ လူငယ်တွေ ကို ဖွေရှာမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ တော်တယ်။ ပြီးတော့ မလေးရှားအသင်းကိုလမ်းမှန်ပေါ် မှာ ရပ်တည်နိုင်အောင် တည့်မတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ နာမည်ရှိတယ်။ ဒီတော့ သူ့လက်ထွက် လူငယ် လေးတွေ ထဲမှာ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုမျိုး နေရာရလာမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမယ်။
ပြီးတော့ သူဟာ သက်တမ်းအလိုက် ကစားသမားတွေကို အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ စီမံခန့် ခွဲမှုကောင်းတဲ့ အစုအဖွဲ့အောက်မှာ သေချာသွားနေတဲ့ နည်းပြလည်းဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၁ က စလို့ အခုအချိန်အထိ မလေးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ လူငယ်အသင်းတွေကို လှည့်ပတ်ပြီး နည်းပြလုပ်နေခဲ့သူပါ၊ အခုအချိန်မှာတော့ သူ့လက်ထွက် မလေးရှားယူ-၂၂ ကို အကောင်းဆုံး မွမ်းမံပြီးတော့ ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ ဆုဖလားရအောင်လို့ ပြင်ဆင်လာပြန်ပါပြီ။
သူရဲ့ ဒီနှစ်ပြင်ဆင်ပုံကလည်း ထိထိမိမိရှိတယ်။ ၀ါရင့်ကစားသမားတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ အနေအထားမှာ မလေးရှား လူငယ်အသင်းအတွက် အသက်ကျော်ကစားသမားခေါ်ဖြည့်ရာ မှာ အတွေ့အကြုံရဖို့ ဆိုပြီး ယူ-၂၂ အသင်းမှာ ၂၃ နှစ် နဲ့၂၄ နှစ်သားကစားသမား ခံစစ်မှူးတွေ သာခေါ်ယူဖြည့်တင်းလာတယ်။ ကျန်တာကို လုံးဝအငယ်တွေချည်းပဲ ရင်းမြစ် အစစ်တွေနဲ့ ပွဲ ထွက်ဖို့ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် ယူ-၂၂ လူငယ် တော်တော်များများကလည်း နိုင်ငံတကာလက် ရွေးစင်အဆင့်အထိ ထိုးထွက် တက်လှမ်းထားတဲ့ လူရည်ချွန် ဘောလုံးသမားငယ်တွေ ခပ်များ များခေါ်ထည့်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။
ဘယ်လောက်အထိတောင်မှလည်းဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ နာမည်ကျော် ခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ SAFAWI RASID ကိုတောင် ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့အထိ ပြတ်သားစွာ အသင်းကို ထူထောင်ထားတာ ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ လုံးဝ ယူ-၂၂ မှာ ပွဲမတိုးဖူးသေးတဲ့သူတွေလည်းခေါ်ယူလာတယ်။ သူ့ နေရာနဲ့ သူ အကောင်းစားဖြစ်အောင်လို့ ရှေ့၊လယ်၊နောက်၊ နေရာအသီးသီးမှာ ကစားသမား ကောင်းတွေကို အပြည့်ဖြည့်လာတာ မြင်ရမယ်။
မလေးရှားနည်းပြဖြစ်သူ ဟာ သူ့လက်ထဲမှာ ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင် မလေးလူငယ်အသင်းကို ဆီးဂိမ်း ဘောလုံး ပြိုင် ပွဲမှာ ချန်ပီယံအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ၁ ကြိမ် ဆုဖလားရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒုတိယဆုကို ၂၀၁၇ မှာ ထိုင်းကို ၀-၁ နဲ့ရှုံးပြီးတော့ ရထားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံလက်ရွေးစင် အဆင့်မှာထူးချွန်တဲ့ ဘောလုံးသမား တွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပြကောင်းတစ်ယောက်လက်ထဲမှာ ဘောလုံးသမားတွေ မလေးရှားအသင်းမှာပေါ်ထွန်းလာတာမဆန်းပါဘူး။
ပြည်တွင်းလိဂ်တွေကလည်း အရှုပ်အထွေးတွေများတာတောင်မှ အောင်မြင်မှုအပြည့်နဲ့ ပရိသတ် အကြိုက်ခရီးဆက်နိုင်တာကလည်း နိုင်ငံတာအဆင့်မှာ မလေးရှားလက်ရွေးစင် အသင်းအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေပဲဖြစ်တယ်။
အခုလက်ရွေးစင်အဆင့်တက်လှမ်းမယ့် မလေးရှား လူငယ်အသင်းမှာ ပြည်တွင်းဖြစ်တွေ ရော၊ ပြည်ပထွက်ကစားနေတဲ့ သူတွေရော အားလုံးရောပြီး စုဖွဲ့ထားတယ်။ ခြေစွမ်းနဲ့ လုပ်အားနှုန်း ကို ကြည့်ပြီး အသင်းအတွက် စုစည်းမှုအပြည့်နဲ့ ပေးဆပ်နိုင်သူတွေကို သူက ဦးစားပေးခေါ် ထားတယ်။
ပြည်ပမှာထွက်ကစားနေတဲ့ ဂျပန် ကလပ် FAGIANO OKAYAMA ကလပ်မှ HADI FAYYADH ၊ သြစတြေးလျကလပ်ဖြစ်တဲ့ CENTRAL COAST MARINERS ရဲ့ ယူ-၂၁ မှာ ပါဝင်ကစားတဲ့ ကွင်း လယ်လူ QUENTIN CHENG ၊ ပြီးတော့ ထိုင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ POLICE TERO မှာ အငှားသွားကစားနေတဲ့ JOHOR DARUL TA’ZIM ကလပ်က ခံစစ်လူငယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူဖွား မလေးရှားသားဖြစ်တဲ့ DOMINIC TAN JUN JIN တို့ကို ဒီဆီးဂိမ်းမှာတွေ့ရမယ်။
အခြားပြည်တွင်းဖြစ် ကစားသမားတွေအားနဲ့ မလေးရှားယူ-၂၂ ကို သေချာတည်ဆောက် ထားတယ်။ ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ HAZIQ NADZLI ဆိုရင်လည်း မလေးရှား ယူ-၁၅ မှနေပြီး အဆင့်ဆင့် လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးအထိ တက်လှမ်းကစားထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသင်းမှာတော့ လက်ရွေးစင်အဆင့်အထိ ပွဲပေါင်းများစွာတိုးထားဖူးတဲ့ လူငယ် ကစားငယ် လေးတွေ လည်း အများအပြားရှိနေတယ်။
၂၂ နှစ်သားဖြစ်တဲ့ SYAMER KUTTY ABBA ဆိုရင် လူငယ် မလေးရှားအသင်းမှာ ပွဲပေါင်း ၂၀ ကျော် အထိ ကစားထားသလို လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးအထိ ၁၉ ပွဲရောက်အောင် နွဲထားတဲ့ ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်။
ဒီအသင်းဟာ ၂၀၁၉ အတွင်းမှာ သြစတြေးလျကို ၁-၁၊ တရုတ် အသင်းကို ၂-၂ အထိ ခြေရည် တူ လိုက်ကစားထားတဲ့အသင်းဖြစ်နေတယ်။ အခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း မလေးရှား လူငယ် အသင်းဟာ ခြေစွမ်းထက်ထက်နဲ့ ကစားနေတာကြောင့် မနက်ဖြန် မြန်မာနဲ့အဖွင့်တွေ့မယ့် ဒီ အသင်းဟာ ကိုယ်တွေအတွက် အထူးကို သတိထားစောင့်ကြည့် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အသင်း အဖြစ် ရှိနေတယ်ဆိုတာ . . .
မလေးရြားကူမန်မာနဲႚမနက်ူဖန်တြေႚမယ်။ အဖငြ့်ပြဲူဖစ်တယ်။ သူတိုႚတေကြလည်း ဒ္ဘီပိင်ြပဲမြာ ဆုဖလား မနြ်းနေတဲ့ အသင်း ၊ ၂၀၁၇ တုန်းကူမန်မာကို အုပ်စုအတငြ်းမြာ အိုိံင်ကစားထား တဲ့အသင်ူးဖစ်တယ်။ ဆီးဂိမ်းမြာ နောက်ဆုံးတြေႚဆုံထားမြူဖစ်တယ်။ အူခားနေရာတေမြပၝ ဘူး ၊ ဒ္ဘီပိင်ြပြဲ သီးသန်ႚအူဖစ်ထည့်ေူပာူဖစ်တာတေပြေၝ့။
္ဘပီးတော့မလေးရြားနည်ူးပူဖစ်သူ ONG KIM SWEE ဆိုတာကလည်း လူငယ်အသင်း၊ လူဋ္ဌကီး အသင်းမြာ သူေူခ၊ သူႚလက်တေခြဵည်းပၝပဲ၊ မလေးရြား အသင်းသားတြေ အားလုံးဟာ သူႚလက် ထကြ်ူဖစ်တယ်။ ဦုးကည်လင်ြလိုမဵြိး သူဟာ လည်း မလေးရြားလက်ရြေးစင်အသင်းရဲႚ ခေၝင်း ကိုင် ဂုရုတစ်ပၝူးဖစ်တယ်။ အသက်က ၄၈ိံစ်ြပဲရြိသေးပေမယ့် သူႚစမြ်းဆောင်မနြဲႚ လူငယ်တြေ ကို ဖေရြာမြေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာမြာ တော်တယ်။္ဘပီးတော့ မလေးရြားအသင်းကိုလမ်းမန်ြပေၞ မြာ ရပ်တည်ိုံင်အောင် တည့်မတ်ပေးတဲ့နေရာမြာ နာမည်ရြိတယ်။ ဒီတော့ သူႚလက်ထကြ် လူငယ် လေးတြေ ထဲမြာ ဘယ်သူတေဘြယ်လိုမဵြိး နေရာရလာမလဲဆိုတာုကည့်ရမယ်။
္ဘပီးတော့ သူဟာ သက်တမ်းအလိုက် ကစားသမားတေကြို အဆင့်ဆင့်ူပစြုပဵြိးထောင်ဖိုႚ စီမံခန်ႚ ခြဲမကြောင်းတဲ့ အစုအဖြဲႚအောက်မြာ သေခဵာသြားနေတဲ့ နည်ူးပလည်ူးဖစ်တယ်။ ၂၀၁၁ က စလိုႚ အခုအခဵိန်အထိ မလေးရြားလက်ရြေးစင်အသင်းနဲႚ လူငယ်အသင်းတေကြို လညြ့်ပတ်္ဘပီး နည်ူးပလုပ်နေခဲ့သူပၝ၊ အခုအခဵိန်မြာတော့ သူႚလက်ထကြ် မလေးရြားယူ-၂၂ ကို အကောင်းဆုံး မမြ်းမံ္ဘပီးတော့ ဆီးဂိမ်းဘောလုံး္ဘပိင်ြပဲမြာ ဆုဖလားရအောင်လိုႚူပင်ဆင်လာူပန်ပၝ္ဘပီ။
သူရဲႚ ဒီိံစြ်ူပင်ဆင်ပုံကလည်း ထိထိမိမိရြိတယ်။ ဝၝရင့်ကစားသမားတြေ အမဵားဋ္ဌကီးရြိနေတဲ့ အနေအထားမြာ မလေးရြား လူငယ်အသင်းအတကြ် အသက်ကေဵာ်ကစားသမားခေၞူဖည့်ရာ မြာ အတြေႚအဋ္ဌကြံရဖိုႚ ဆ္ဘိုပီး ယူ-၂၂ အသင်းမြာ ၂၃ိံစြ် နဲႚ၂၄ိံစ်ြသားကစားသမား ခံစစ်မြးတြေ သာခေၞယူဖည့်တင်းလာတယ်။ ကဵန်တာကို လုံးဝအငယ်တေခြဵည်းပဲ ရင်ူးမစ် အစစ်တေနြဲႚ ပြဲ ထက်ြဖိုႚရြိနေတယ်။ အဲ့ဒၝအူပင် ယူ-၂၂ လူငယ် တော်တော်မဵားမဵားကလည်ိးိုံင်ငံတကာလက် ရြေးစင်အဆင့်အထိ ထိုးထကြ် တက်လမြ်းထားတဲ့ လူရည်ခဵနြ် ဘောလုံးသမားငယ်တြေ ခပ်မဵား မဵားခေၞထည့်ထားတယ်ဆိုတာတြေႚရမယ်။
ဘယ်လောက်အထိတောင်မလြည်းဆိုတောူ့ပည်တငြ်းမြာ နာမည်ကေဵာ်ေူခစမြ်းထက်နေတဲ့ SAFAWI RASID ကိုတောင် ခဵန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့အထိူပတ်သားစြာ အသင်းကို ထူထောင်ထားတာူဖစ်နေတယ်။္ဘပီးတော့ လုံးဝ ယူ-၂၂ မြာ ပဲမြတိုးဖူးသေးတဲ့သူတေလြည်းခေၞယူလာတယ်။ သူႚ နေရာနဲႚ သူ အကောင်းစာူးဖစ်အောင်လိုႚ ရြေႚ၊လယ်၊နောက်၊ နေရာအသီးသီးမြာ ကစားသမား ကောင်းတေကြို အူပည့်ူဖည့်လာတာူမင်ရမယ်။
မလေးရြားနည်ူးပူဖစ်သူ ဟာ သူႚလက်ထဲမြာ ဆီးဂိမ်းဘောလုံး္ဘပိင်ြပဲနြဲႚပတ်သက်လာရင် မလေးလူငယ်အသင်းကို ဆီးဂိမ်း ဘောလုံး္ဘပိငြ် ပဲမြာ ခဵန်ပီယံအူဖစ် ၂၀၁၁ ခိုံစ်ြမြာ ၁ ဋ္ဌကိမ် ဆုဖလားရအောင်စမြ်းဆောင်ပေးထာိးုိံင်တယ်။္ဘပီးတော့ ဒုတိယဆုကို ၂၀၁၇ မြာ ထိုင်းကို ဝ-၁ နဲႚရြံး္ဘပီးတော့ ရထားခဲ့တဲ့သူဖစ်တယ်၊ိုိံင်ငံလက်ရြေးစင် အဆင့်မြာထူးခဵန်ြတဲ့ ဘောလုံးသမား တေကြို မြေးထုတ်ပေိးုိံင်တဲ့ နည်ူးပကောင်းတစ်ယောက်လက်ထဲမြာ ဘောလုံးသမားတြေ မလေးရြားအသင်းမြာပေၞထနြ်းလာတာမဆန်းပၝဘူး။
ူပည်တငြ်းလိဂ်တေကြလည်း အရပ်ြအထြေးတေမြဵားတာတောင်မြ အောင်ူမင်မအြူပည့်နဲႚ ပရိသတ် အဋ္ဌကိက်ြခရီးဆက်ိုိံင်တာကလည်ိးုိံင်ငံတာအဆင့်မြာ မလေးရြားလက်ရြေးစင် အသင်းအောင်ူမင်မရြဖိုႚအတကြ် ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ဒေၝက်တိုင်တေပြဲူဖစ်တယ်။
အခုလက်ရြေးစင်အဆင့်တက်လမြ်းမယ့် မလေးရြား လူငယ်အသင်းမြာူပည်တငြ်ူးဖစ်တြေ ရော၊ူပည်ပထက်ြကစားနေတဲ့ သူတေရြော အားလုံးရ္ဘောပီး စုဖြဲႚထားတယ်။ေူခစမြ်းနဲႚ လုပ်အာိးံနြ်း ကိုကည့်္ဘပီး အသင်းအတကြ် စုစည်းမအြူပည့်နဲႚ ပေးဆပ်ိုိံင်သူတေကြို သူက ဦးစားပေးခေၞ ထားတယ်။
ူပည်ပမြာထက်ြကစားနေတဲ့ ဂဵပန် ကလပ် FAGIANO OKAYAMA ကလပ်မြ HADI FAYYADH ၊ ဩစေုတးလဵကလပ်ူဖစ်တဲ့ CENTRAL COAST MARINERS ရဲႚ ယူ-၂၁ မြာ ပၝဝင်ကစားတဲ့ ကငြ်း လယ်လူ QUENTIN CHENG ၊္ဘပီးတော့ ထိုင်းကလပ်ူဖစ်တဲ့ POLICE TERO မြာ အငြားသြားကစားနေတဲ့ JOHOR DARUL TAメZIM ကလပ်က ခံစစ်လူငယ်ကစားသမာူးဖစ်တဲ့ စင်ကာပူဖြား မလေးရြားသာူးဖစ်တဲ့ DOMINIC TAN JUN JIN တိုႚကို ဒီဆီးဂိမ်းမြာတြေႚရမယ်။
အူခာူးပည်တငြ်ူးဖစ် ကစားသမားတေအြားနဲႚ မလေးရြားယူ-၂၂ ကို သေခဵာတည်ဆောက် ထားတယ်။ ဂိုးသမာူးဖစ်တဲ့ HAZIQ NADZLI ဆိုရင်လည်း မလေးရြား ယူ-၁၅ မနြေ္ဘပီး အဆင့်ဆင့် လက်ရြေးစင်အသင်းဋ္ဌကီးအထိ တက်လမြ်းကစားထားတဲ့သူဖစ်တယ်။ ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် အသင်းမြာတော့ လက်ရြေးစင်အဆင့်အထိ ပဲပြေၝင်းမဵားစြာတိုးထားဖူးတဲ့ လူငယ် ကစားငယ် လေးတြေ လည်း အမဵားအူပားရြိနေတယ်။
၂၂ိံစ်ြသာူးဖစ်တဲ့ SYAMER KUTTY ABBA ဆိုရင် လူငယ် မလေးရြားအသင်းမြာ ပဲပြေၝင်း ၂၀ ကေဵာ် အထိ ကစားထားသလို လက်ရြေးစင်အသင်းဋ္ဌကီးအထိ ၁၉ ပဲရြောက်အောင်ြိဲံထားတဲ့ ကစားသမားလည်ူးဖစ်တယ်။
ဒီအသင်းဟာ ၂၀၁၉ အတငြ်းမြာ ဩစေုတးလဵကို ၁-၁၊ တရုတ် အသင်းကို ၂-၂ အထိေူခရည် တူ လိုက်ကစားထားတဲ့အသင်ူးဖစ်နေတယ်။ အူခား္ဘပိင်ြပဲတြေမြာလည်း မလေးရြား လူငယ် အသင်းဟာေူခစမြ်းထက်ထက်နဲႚ ကစားနေတာေုကာင့် မနက်ူဖန်ူမန်မာနဲႚအဖငြ့်တြေႚမယ့် ဒီ အသင်းဟာ ကိုယ်တေအြတကြ် အထူးကို သတိထားစောင့်ုကည့် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အသင်း အူဖစ် ရြိနေတယ်ဆိုတာ . . .
Home Football Team Myanmar မနက်ဖြန် မြန်မာနဲ့တွေ့ဆုံမယ့် မလေးရှား ..